Nagarik News - नजलेका काठको क्षतिपूर्ति सिफारिस
Thursday 8 Magh, 2077 | January 21, 2021
समितिले पाँच वर्षयता १ हजार ६ सय गोलिया काठ डढेलोले नष्ट गरेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि वन विभागलाई सिफारिस गरेको छ। काठ ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने नाममा समितिले जलेका काठको तीन पटक अनुगमन गरेको हो।
ठेकेदारले आफूले खरिद गरेका काठको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै उपभोक्ता समिति र स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। ०६८ मा जलेको भनिएका काठको अनुगमन समितिले ०७२ मा दुई पटक र ०७३ मा एक पटक गरी तीन पटक गरेको छ।
तिनै अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा दैवीप्रकोप उद्धार समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षतिपूर्तिका लागि वन विभागलाई सिफारिस गरिदिएका छन्। तर स्थानीय भने प्रशासन, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा क्षतिपूर्ति असुल्न जल्दै नजलेको काठको पटकपटक अनुगमन गराइएको बताउ"छन्।
'२०६८ सालमा आगलागी भएको घटनाको २०७३ सालमा अनुगमन गर्दा पनि आगलागी भएको देखाइयो, यो हुनै नसक्ने कुरा हो,' परशुराम नगरपालिका–२ का स्थानीय रमेश पनेरुले भने, 'माटो भइसकेको काठ पाँच वर्षपछि अनुगमन टोलीले कसरी आगलागी भएको देखे? कुन आधारमा यत्रो संख्या देखाइयो?'
अनुगमन टोलीले अहिलेसम्म ०६८ यता १ हजार ६ सय गोलिया आगालागीमा नष्ट भएको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको हो। अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदनप्रति स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। '१ हजार ६ सय गोलिया जल्दा किन उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई थाहाँ भएन?' आलिताल गाविस–६ का सुरेन्द्र बोहराले प्रश्न गरे।
'एउटा सालको गोलिया जल्न कम्तीमा दुई दिन लाग्छ,' उनी भन्छन्, 'कसरी त्यत्रो संख्यामा गोलिया जले, त्यो प्रशासनले स्पष्ट पार्नुपर्छ।'
वन स्रोतका अनुसार वन कार्यालयले १७ भन्दा बढी वनमा आगो लागेको रिपोर्ट तयार गरिरहेको छ। कार्यालयले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यो प्रतिवेदनमा पनि डढेलो नलागेको वनमा समेत लागेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। आलिताल क्षेत्रका आधा दर्जन वनकर्मीले अनुगमन नै नगरी काठ जलेको प्रतिवेदन दिएको वन स्रोतको दाबी छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जिल्ला वन कार्यालयले समितिबाट विभागमा सिफारिसका गराउनका लागि धेरै पटकपटक प्रतिवेदन पेस गरेको जानकारी दिए।
'यो मुद्दा समितिको बैठकमा धेरै पटक आएको थियो। धेरै सिडियोले त्यो फाइल हेरे। धेरै अनुगमन भए,' प्रजिअ लुइँटेलले भने, 'समितिका सबै सदस्यको सहमतिमा मैले राजस्व फिर्ताका लागि सिफारिस गरेको हु"।'
नयाँ रुख काट्न अख्तियारले रोक लगाएपछि काठ तस्कर र ठेकेदारले नयाँ उपाय अपनाएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार ठेकेदारहरु आफूले तराईमा लगेर बेचिसकेको काठ पनि जलेको देखाएर राजस्व फिर्ता दिने दाउमा छन्। 'कम काठ जलाएर करोडौं रुपैया क्षतिपूर्ति लिन जिल्ला वन कार्यालयले सहयोग गरिरहेको छ,' बोहराले भने।
जिल्ला वन कार्यालयले कुनकुन ठाउँमा आगलागी भएको हो, त्यसको तथ्यांक पठाउन सम्बन्धित क्षेत्रका इलाका वन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। काठका ठेकेदार पुरानो काठ बेचेर त्यसवापत वन कार्यालयको सिफारिसमा क्षतिपूर्ति असुल्न लागिपरेको वन स्रोतले नागरिकलाई जानकारी दियो। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका, आलिताल, असीग्राम र बगरकोट गाविसमा ठूलो परिमाणमा पुरानो काठ रहेको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक छ।
जिल्लामा २०६८ देखि २०७० सालमा काटिएको काठको एकिन तथ्यांक लुकाउन काम भइरहेको छ। 'आफैं आगो लगाएर आफैं क्षतिपूर्ति माग्नु गैरकानुनी काम हो।' सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष चन्द्रदेव बोहराले भने, 'यस्ता काम गर्नु सरासर गलत हो।'
दुईतीन वर्ष पहिले नै टेन्डर भएर राजस्व बुझाइसकेको पुरानो काठलाई जलाएर क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न थालिएको हुनसक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष बोहराले बताउँछन्। बेचिसकेको काठलाई पनि जलेको देखाउँदै वनकर्मीले क्षतिपूर्ति सिफारिस गरिरहेको नेपाली कांग्रेस नेता कैलाशकुमार पाण्डेय बताउँछन्।
परिमाण कम, दाबी बढी
परशुराम नगरपालिका–७ मा रहेका बैजनाथ सल्लेरी सामुदायिक वन ८ सय ६ थान गोलिया र परशुराम नगरपालिका–११ बैजनाथ सामुदायिक वनमा १ हजार ६ सय ७६ थान सालका गोलिया जलेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग विभागलाई पठाएको छ। स्थानीयका अनुसार त्यति काठ भित्री मधेस क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा जलेको छैन। बगरकोट गाविसको अइडुङरागाउँमा रहको सल्लाको काठको पनि कम क्षति भएर बढीको दाबी गरिएको छ। ठेकेदारले आगो लगाएर प्रहरीबाट समेत मुचुल्का बनाउने गरेको आलितालका एक स्थानीय बताउँछन्।
क्षतिपूर्तिका पहिलो चरणमा एक दर्जन वनका फाइल विभागमा पुगेका छन्। प्राकृतिक प्रकोप भन्दै क्षतिपूर्तिमा वनकर्मी, ठेकेदार र उपभोक्ताको मिलोमतो भएको स्थानीय समाजसेवी दलबहादुर धामी बताउँछन्।
वन कार्यालयका प्राविधिकको मिलोमतोमा कम परिमाण जलेको भए पनि बढी देखाउने गरिएको बगरकोटका स्थानीय राजु पन्तले बताए। जिल्लाका विभिन्न २० भन्दा बढी स्थानमा घाटगद्दीमा राखिएको साल र सल्लाको काठमा बढी आगो लागेको छ।
ठेकेदार र वनकर्मी सँगसँगै अनुगमनमा
परशुराम नगरपालिका विभिन्न ठाउँको काठमा भएको आगलागी अनुगमनमा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र काठका ठेकेदारसँगसँगै गाउँगाउँ पुगी अनुगमन गरेका छन्।
वनकर्मीले ठेकेदारले जलाएको काठको मात्र अनुगमन गरी जिल्ला वन कार्यालय र विभागमा पठाएको स्रोतको दाबी छ। नयाँ काठ काट्न उपभोक्ता पनि तयार नभएपछि काठ तस्करले पुरानो काठ जलाई प्रतिवेदनबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। अधिकांश ठाउँमा सालका गोलियाबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा आगलागी भएको छैन।
बैजनाथ सामुदायिक वन र सल्लेरी सामुदायिक वनमा सबै पक्षले सँगसँगै अनुगमन गरेका छन्।